Hochiminh - Mui Ne - Da Lat (5D/4N)KH - 2004
2017ရဲ့  ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ပျော်ပျော်ခရီးထွက်ချင်သူများအတွက် အသွားသင့်ဆုံးခရီးစဉ်။
Day : 1 Yangon - Hochiminh (Cruise Dinner)
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင်နေ့လည်11 ခွဲတွင်လူစုကာ လေယာဉ်ဖြင့်ဟိုချီမင်းမြို့ သို့ထွက်ခွာပါမည်။ ညနေ၃နာရီခွဲခန့်တွင်ရောက်ရှိပြီး လေဆိပ်တွင်ဧည့်လမ်းညွှန်မှကြိုဆိုကာ ဟိုချီမင်းမြို့ ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပါမည်။ နာမည်ကြီးလှသော Reunification Palace, Notre Dame Cathedral (ဘုရားကျောင်း) တို့တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။ Notre Dame Cathedral ကို 1863 – 1880 အတွင်းတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တည်ဆောက်ခဲ့သော အုတ်မှအစ ပြင်သစ်မှမှာယူတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်းရှေ့ ရှိStatue of Lady of Peace ရုပ်ထုကို ရောမမှမှာယူကာခဲ့သည်။ ပြီးလျှင်ဘေးနားတွင်ရှိသော Central Post office သို့သွားရောက်လေ့လာပါမည်။ 1886-1891 တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အတွင်းမှ မြေပုံပန်းချီလက်ရာ ၂ခုမှာ နာမည်ကြီးသည်။ ထိုမှပြီးလျှင်Saigon Paris Square ရှိOpera House & City Hall နေရာများတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။ ပြင်သစ်လက်ရာများဖြစ်သဖြင့် အလွန်အနုပညာဆန်ပြီးလှပပါသည်။ ပြီးလျှင်သဘေ င်္ာပေါ်တွင် ဖျော်ဖြေပွဲပါသော ညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံကာ Ben Thanh ညဈေးကိုလျှောက်ကြပြီးလျှင်ဟိုတယ်တွင်ပြန်လည်ကာ အနားယူပါမည်။
Day :2Hochiminh - Mui Ne (Breakfast, Lunch & Dinner)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ၄နာရီကျော်ခန့်ကားမောင်းကာ Mui Ne ကမ်းခြေသို့သွားကြပါမည်။ နေ့လည်စာအား Restaurant တွင်တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ Mui Ne ကမ်းခြေသို့ရောက်လျှင်သဲဖြူ နှင့်သဲနီ ကန္တာရ သို့သွားပါမည်။ သဲဖြူကန္တရတွင် သုံးဘီးဆိုက်ကယ်များစီးကြပြီးဓာတ်ပုံများရိုက်ကြပါမည်။ ပြီးလျှင်သဲနီသို့သွားကာ သဲလျောစီးကြပါမည်။ ထိုမှပြီးလျှင်America’s Grand Canyon သေးစားလေးနှင့်တူသော Fairy Stream - နတ်သမီးချောင်းလေးသို့သွားပါမည်။ ပြီးလျှင်ညစာ သုံးဆောင်ကာ ဟိုတယ်တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :3Mui Ne - Da Lat (Breakfast, Lunch & Dinner)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင်ပင်လယ်ထဲဆင်းရန်အချိန်ပေးပါမည်။ ပြီးလျှင် ဒါလတ်မြို့သို့ထွက်ခွာပါမည်။ ၄နာရီခန့်မောင်းနှင်ပြီဒါလတ်သို့ရောက်ရှိပါမည်။ နေ့လည်စာအား Restaurant ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။ ဒါလတ်မြို့ သို့ရောက်ရှိလျှင်အောက်ပါနေရာများကိုရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီး ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ Robin တောင်ပေါ်မှ Tuyen Lam ကန်ကိုဖြတ်ကာ ရှည်လျားလှသော Cable Car စီးရင်း ဒါလတ်မြို့ ရှုခင်းများကို ကြည့်ရှုကာ Truc Lam ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့သွားပါမည်။ ဘုရင် Bao Dai’s ၏တောင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသော နွေရာသီနန်းတော်၊ ဒါလတ်မြို့၏ပန်းခြံ(ပန်းမျိုးပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ရှိကာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးပွင့်လေသည်)၊ XQ Embroidery Centre - ပိုးချည်ထိုးပန်းထိုးနေရာ အလွန်သွားသင့်သော လက်ရာမြောက်လှသောလက်ရာများပြထားသော၊ ပြုလုပ်ဆဲများလည်းရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ ဒါလတ်၏အကြီးဆုံးနှင့်အလှဆုံး Xuan Huong Lake၊ ၀က င်္ဘာဆန်စွာဆောက်လုပ်ထားသော Crazy House။ ညစာသုံးဆောင်ပြီး ဒါလတ်ညဈေးလျှောက်ကာ ဒါလတ်တွင်အနားယူပါမည်။
Day :4Da Lat - Hochiminh (Breakfast, Lunch & Dinner)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ဒါလတ်ရေတံခွန်သို့သွားပါမည်။ ရေတံခွန်ထက်ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ ရေတံခွန်သို့အသွားနှင့်အပြန်တွင်စီးရသော Apline Coaster ဖြစ်သည်(Coaster ခပါဝင်ပြီး) ။ ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလှပါသည်။ ပြီးလျှင်ဟိုချီမင်းမြို့သို့ပြန်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာနှင့်ညစာ ကိုRestaurant တွင်တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ဟိုချင်မင်းမြို့ တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :5Hochiminh - Yangon (Breakfast)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး check out လုပ်ကာ လေဆိပ် မှလေယာဉ်ဖြင့်ရန်ကုန်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။ --------------Service End
1. ရန်ကုန် - ဟိုချီမင်း အသွားအပြန်လက်မှတ်ခ
2. ဟိုတည်တွင် ၄ည တည်းခိုခ (၂ယောက်တစ်ခန်း)
3. ခရီးစဉ်တွင်ရေးပြထားသော စားစရိတ် (Drink ခမပါဝင်ပါ)
4. ခရီးစဉ်တွင်ရေးပြထားသောနေရာများသို့ ကားခများ
5. မြန်မာမှ Tour Leader နှင့်English စကားပြောသော Tour Guide ခ
6. ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သည်ဟုရေးပြထားသောနေရာများ၏ ၀င်ကြေးများ
7. တစ်နေ့လျှင် ရေတစ်ဗူး